I-Semalt: Iyini i-Viagra Spam?
Igor Gamanenko, the Semalt Manager Manager Impumelelo, uthi kukhona iqembu elithile labaduni baseRussia abaye bathuthukisa botnet ukukhiqiza spam yokudluliselwa. Lokhu kuhlaselwa kogaxekile kuhilela ukuthumela amathani we-imeyili anikezela ukuthenga imikhiqizo enjenge-Viagra noma imithi yokwandisa izitho zesilisa. Lokhu kuhlaselwa kogaxekile kwakwazi ukumboza mayelana nesithathu ye-imeyili yama-spam yomhlaba. Abahlaseli ngemuva kwalolu hlelo, basebenzisa izindlela zomthetho ezingekho emthethweni ukuze bathole imali. Okokuqala, lawa kwakuyizingcingo ezikhohlisayo ezidinga abantu ukuthi bathenge amasayithi okugaya. Okwesibili, laba abagaxekile bathumela izidakamizwa ezingekho emthethweni ezivela eNdiya noma eRussia ezihlaselweni zabo ezingalindelekile - οδοντοβουρτσα oral b ανταλλακτικα. Ukunciphisa indaba ende, uthumele ama-imeyili kuzigidi zabantu abamukelayo, benethemba lokwenza amakhulu uma kungenjalo izinkulungwane zokuthengisa.
Njengoba lezi zigebengu zazifeza lezi zenzo zobugebengu, zigijimela i-malware namagciwane kumakhompiki abo. Umshini okhishiwe awuzange usebenze kahle futhi ulandele umyalo wokuhlasela kuphela. Ekuqapheliseni ukuthi izisulu zaziyiningi labantu baseMelika. Umyalo wokuqala womhlaseli kwakuwukuqoqa amakheli e-imeyili nokwenza uhlu lwabamukeli abavumelekile. Lonke uhlelo lwabulawa ngendlela yokuhlaselwa kwe-botnet..Ukulandela uphenyo olunzulu, abanye abantu ngemuva kwalokhu kuhlaselwa baboshwe. Kodwa-ke, ngokombono wami, i-Viagra-spam ayimisiwe, futhi singalindela ukuhlaselwa okuningi kwe-hacker esikhathini esizayo.
Indlela ugaxekile osebenza ngayo
Ngokusho kwesifundo esivela eNyuvesi yaseCalifornia, amabhange amaningi kanye nabathengisi benza lula ukusabalalisa amanye alawa ma-imeyli ogaxekile. Lokhu kusho ukuthi amanye amaqembu ngemuva kwamaphrojekthi e-pharma e-intanethi anesithakazelo ekushayeleni ukuthengiswa kwemikhiqizo yezokwelapha.
Ngesikhathi sokucwaninga, abacwaningi kanye nomlobi wezombangazwe baye baphetha ngokuthi abakwa-spammers basebenzisa izindlela ezilandelayo ukusebenzisa uhlelo lwabo olubi:
Njengazo zonke izindlela zokuthengisa zedijithali ezivamile, abahlaseli basebenzisa ukukhangisa njengendlela yokukhuthaza umkhiqizo ku-intanethi. Ngokuvamile, laba bahlaseli basebenzisa ama-imeyili njengendlela ekhethwa yokufinyelela abathengi abangakwazi ukuthenga ngamabhulogi ogaxekile, imidiya yezenhlalo, ukuthuthukisa injini yokusesha, njll. Ochwepheshe bathi ukulawula abasebenzisi bewebhu ngokuqapha ikheli le-IP kungenza inqubekelaphambili enkulu futhi kusize abasebenzisi ukuba bahlale kulokhu kuhlaselwa . Kuyadabukisa ukuthi-ke, kulinganiselwa ukuthi amaphesenti angama-70 kuwo wonke ama-imeyili asemhlabeni wonke ayesegaxekile.
2. Chofoza ukwesekwa
Abahlaseli basebenzisa le ndlela ukuze baqondise kabusha abasebenzisi kwiwebhusayithi yabo ngokufaka izixhumanisi ezinonya noma ze-phishing kuma-imeyili abo. Baxhuma ezitolo zezidakamizwa ze-intanethi, ezamukela futhi zenze i-oda lamakhasimende. Ngokuvamile, le ngxenye iyenziwa yizinhlangano ezizimele ezingenalo okufanayo nabathumeli bogaxekile nabamakhompiki be-botnet. Ezimweni eziningi, abahlaseli basebenza njengabambisene nalawa mawebhusayithi, lapho bathola khona 30 kuya ku-50% yenani lemali yokuthengisa.